Poolisii Federaalaa Itoophiyaa: Shakkamtoonni maqaa adda addaa himachuun namoota dararaa turan - BBC News Afaan Oromoo
Poolisii Federaalaa Itoophiyaa: Shakkamtoonni maqaa adda addaa himachuun namoota dararaa turan
Dhimmisaanii kaleessa ilaalamee beellama yeroo kennuuf har'atti kan beellamame shakkamtootni dhiittaa mirga namoomaa 33, har'a mana murtii federaalaa damee Lidataa dhaddacha yakkaa 10ffaatti dhiyaataniiru.
Galmee Obbo Gohaa Atsibahaa kana jalatti hojjettootni Tajaajila Odeeffannoo fi Tika Biyyaalessaa [NISS], miseensootni poolisii federaalaa fi magaalaa Finfinnee akkasumas hojjettootni manneen sirreessaa yakka dararaa fi dhiittaa mirga namoomaan shakkaman ni argamu.
Namoota ukkaamsuun manneen hidhaa dhokatoo fi seera qabeessa hin taane keessatti hidhuu, qaama hormaataa isaanii piinsaadhaan harkisuu, areeda namootaa ibiddaan gubuu fi reebichi yakkoota komishinii poolisii federaalaatti waajjirri qorannoo yakkaa shakkamtootni kun raawwatamaniiru jedhee mana murtiif hime keessaa isaan muraasa. Shakkamtootni kun wayita namoota dararaa turanitti maqaawwan garaagaraa himachaa waan turanif, ragaaleen koo maqaa qofaan osoo hin taanee shakkamtoota qaamaan arguun naaf mirkaneessu jechuun poolisiin himeera. Kana malees iyyataan waajjirri qorannoo yakkaa komishinii poolisii federaalaa, yakki namootni ittiin shakkaman walxaxaa waan ta'ef, namootni miidhaan irratti qaqqabe iddoo fagoo waan jiranif, ragaalee dabalataa walitti qabuuf yeroon qorannoo dabalataa na barbaachisa jedheera.
Abukaatoowwan shakkamtootaas; poolisiin hojii qorannoo nan hojjedha jedhu haalaan hojjechaa hin jiru, shakkamtootni bilbilli bilbilameefii ofumaaf seeratti harka kennatan waan ta'ef ragaa hin balleessan kanaafuu beellamni guyyaa 14 kennamuu hin qabu, maamiltootni keenya mirga wabii argachuu qabu jechuun mana murtiif iyyataniiru.
Kana malees haalli shakkamtootni itti iddoo turtii isaaniitti itti jiran gaarii akka hin taane abukaatoon shakkamtootaa himeera.
Poolisiin gama isaatin haalli shakkamtootni itti jiran seera qabeessa kan ta'eedha jedheera.
Manni murtichaa gama isaatin shakkamtootni rakkoo iddoo itti hidhamanitti isaan mudate bifa iyyataan akka dhiyeessan beeksiseera.
Xumurarrattis, manni murtichaa yaada qorattoota waajjira qorannoo yakkaa komishinii poolisii federaalaa fi abukaatoo shakkamtootaa erga dhagahee booda dhimmicha ilaaluuf boru waaree boodatti beellama qabateera.